Onyeisi otu a na steeti Anambra, bụ Chiifu Damian Okeke-Ogene kpọrọ oku a n'Ọka bụ isi obodo steeti ahụ, ma kwuo ka a nwụchikọọ ma kpụpụ ndị arụrụ ala ahụ ụlọ ikpe banyere mgbusi ahụ ha gbusiri imiriki mmadụ na steeti Benue na na mpaghara ebe ọzọ dị iche iche n'ala anyị, iji wee hụ na obi ruru ndị nke ahụ metụtara ala, ma hụkwa na udo tọrọ atọ dị n'ala anyị.
O kwuru na o kwesighịdị ekwesi chaa chaa ka gọọmenti etiti mepee ọnụ sị na ọ na-enweta mmeri n'agha ahụ ọ na-ebu megide agha iyi egwu n'ala anyị, ebe ndị arụrụ ala ahụ bụ Fụlani na-achị ehi ka na-aga n'ihu na-awakpo, na-agbagbusi, ma na-ebibi ndụ na akụnụba ụmụ mmadụ aka ha dị ọcha, na-ama ụmụnwaanyị elu n'ike, na-emebisi ihe a kọrọ n'ugbo, ma na-akụkwa ọtụtụ akụmakụ ndị ọzọ.
O wee kwuo na ọ ka mma ka e bie ndị a aka n'ala, nasịa ha ngwọ ọgụ niile ahụ ma were usoro iwu nyụchaa ha anya, karịa ma gọọmenti etiti ikpuchite ọnụ ya, mee ka a ga-asị na ọ bụghị mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata, ma ọ bụ na- eme a họrọ ụmụ ụmụ e gbuo ha ichi ma họrọ ụmụ ụmụ chie ha ọzọ, maka nke ahụ ga-aga n'ihu ịgbà ndị ọjọọ ahụ ume, ma gaa n'ihu na-ebute ala adịghị mma n'obodo anyị.
O kwuru na ọ hụghị ihe mere ndị kpọrọ onwe ha ndị na-achị ehi ga-esi nyakọrọsịa egbe, mma, ọgwụ a gwọrọ agwọ na ngwọ ọgụ ndị ọzọ n'ukwu ma na-epiogharị n'ime obodo achọ ndị ha ga-emelila ndụ ha.
Maazị Okeke-Ogene kọwakwazịrị ịkpa ehi dịka ihe mmadụ nkịtị na-emere onwe ya dịka azụm ahịa na ọrụ aka ndị ọzọ mmadụ na-arụrụ onwe ya, bụkwa nke onye ahụ ji aka ya akwalite; ma sị na n'ihi nke ahụ, na onye ọbụla na-achị ehi kwesiri iji aka ya wee na-achọ ụzọ ọ ga-esi na-azụ ehi ya nrị, na-awụbataghị ma ọ bụ bibie ihe nke mmadụ ibe ya ji eri.
Ọ kpọkukwazịrị onye na onye ọbụla ka o mee onwe ya ka ọ bụrụ ezi nwaafọ ala Naịjiria site n'ịsọpụrụ na irube isi nye iwu niile na-achị ala anyị, na-agbanyeghị agbụrụ na mpaghara onye si na ya, ma ọ bụkwanụ okpukperechi ya.